Mialoha izay, tsy azo tsinontsiniavina ihany koa ny lalao fitsapana farany hifanandrinan’ny Barean’i Madagasikara amin’i Maoritania hatao atsy Maraoka afaka 2 andro. Anio no nanomboka ny famondronana faharoa sady farany azy 24 mirahalahy hoentina atsy Egypta ny 20 jona izao. Raha tiana ny hahatoky tena kokoa dia mila mandresy ity ekipam-pirenen’i Maoritania ity isika ny 14 jona izao. Mikaonty amin’ny filaharan’ny FIFA rahateo ny lalao ka mila arenina ireo faharesena 3 taorian’ny nahatafakatra antsika. Ry zareo Maoritanianina moa dia anisan’ny mpandray anjara amin’ity CAN 2019 atsy Egipta manomboka ny 21 jona izao ity.